Khilaaf Albaabada U Xidhay Fadhiga Golaha Guurtida Somaliland – Araweelo News Network (Archive)
Hargeysa(ANN)Khilaaf culus oo ka dilaacay golaha guurtida Somaliland ayaa sababay in albaabada loo xidho gebi ahaanba Fadhigii Golaha Guurtida ee maanta. ka dib markii mudaneyaasha Golahaasi isku maan-dhaafeen mooshin ay 25 Mudane soo gudbiyeen, kaas oo ay ku dalbanayaan in xilka
lagaga xayuubiyo Xoghayaha Guud ee Guurtida C/llaahi Ibraahim Habane (C/llaahi Dheere) oo ay ku eedeeyeen musuq-maasuq iyo inuu maroorsaday awoodii shir-gudoonka.
Ku simaha Guddoomiyaha ahna Guddoomiye Ku xigeenka koowaad Sh. Axmed Sh. Nuux Furre, ayaa gudoominayay fadhigaa, balse waxa ka bilaabmay buuq iyo sawaxan hadheeyay madasha, iyadoo ay mudanayaashu ku kala aragti duwanaadeen mooshinkaa. Mudanayaasha watay mooshinkaa oo doonayay inay xilka ka qaadaan xoghayaha golaha ayaa ku eedey xoghayaha inuu hanti lunsaday. Laakiin waxa mooshinkaa is hortaagay Sheekh Axmed Sheekh Nuux Furre oo fadhiga gudoominayay, iyadoo markaa kadib uu bilaabmay buuq iyo sawaxan, taas oo keentay inuu fadhiga sidaa ku xidho.
Hase yeeshee kulankaa kadib ayaa mudanayaasha qaarkood sharaxaad ka bixiyeen mooshinkaa la doonayay in xilka lagaga qaado xoghayaha golaha.
Xildhibaan Jaamac Faarax (Riyo) ayaa eedo u soo jeediyay shir-gudoonka waxaanu ku dooday in aqalka odayaashu hagaasay, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi, “Waad arkayseen saaka in Golahan muran iyo buuq weyni ka dhashay oo uu dhaliyay khilaafka dhex yaala Golaha dhexdiisa, oo uu sabab u yahay shir-gudoonka Golaha Guurtida. waxa laga warqabaa in Golahani uu hagaasay oo burbur uu qarka u saran yahay oo waxa uu gudan kari waayay shaqadisii dastuuriga ahayd iyo hawlihii uu qaranka u hayay oo waxa masuulka ah shir-gudoonka.”
Sida oo kale waxa isna ka hadlay Xildhibaan Caydiid Cabdi Maxamed oo ka mid ah odayaasha ugu waaweyn golaha, ayaa sheegay inuu golahani yahay gole dhaqan
Xildhibaanku waxa uu hadalkiisii sii raaciyey “Raggan kale ee dhinacan ka hadlaya ee mooshinka wata waxaanu leenahay aynu wanaag ku saxno oo Xoghaya Golaha Guurtida ee C/llaahi Dheere waxa xukuma shir-guddoonka oo waxa noo dhaxeeya shir-guddoonka.” Ayaa yudhi Caydiid.
Badhasaaka Saaxil Ramaax Oo Lala Xidhiidhiyay Fadeexado Musuq-maasuq Oo Gurayaha Dawlada Lagu Iibiyay